अन्ततः खुशिको खबर रुसले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन नेपालमा आउने मिति तोकियो, हेर्नुहोस खोपको नेपाली मूल्य सहित ! – AB Sansar
October 2, 2020 adminLeaveaComment on अन्ततः खुशिको खबर रुसले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन नेपालमा आउने मिति तोकियो, हेर्नुहोस खोपको नेपाली मूल्य सहित !
फेरि १८ दिन सम्म देशभर सम्पुर्ण कुरा बन्द रहने ! भर्खरै गरियो यस्तो निर्णय ! हेर्नुहोस –